Tag: otutu-aka | Martech Zone
Azụmaahịa akpaaka ahịa
Fraịde, Machị 1, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Neolane mepụtara ihe omuma a dika uzo di egwu nye ndi ahia ka ha nyochaa uzo ahia ahia. Ndị ahịa na-ewe ụzọ dị iche iche ịzụlite na ụzọ ụgbọ oloko a na-arụ ọrụ nke ọma iji hụ ha. Usoro ụzọ ụgbọ oloko ọ bụla na-anọchi anya ụdị dị iche iche nke akpaaka ma gụnye ụzọ ndị a tụrụ atụ, ụzọ omume, ụzọ ọtụtụ mmetụ, ụzọ azụmahịa na ụzọ ime. Ọdụ ndị dị n'okporo ụzọ ndị ahụ na-akọwa ọtụtụ ụzọ ọkọlọtọ nke nzukọ gị nwere ike iji dị ka ntụpọ.
Ka m na-agụ ụfọdụ nyocha na saịtị Alteria, m mere n'ofe eserese a na peeji nke ndị ahịa ha. Ihe osise gosipụtara n'ụzọ dị irè otu ahịa si gbanwee. Nyochaa eserese a, o kwesiri ime ka o doo anya ma ahia gi amalitela. Evol ghọrọ onye ahịa? Nwere ụlọ ọrụ gị? Taa, ejiri m oge dị iche iche na atụmanya 3 dị iche iche wee nwee ihe kpatara na ha esiteghị na ya bụ ụjọ, akụrụngwa na nka.